ချောဆီနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်သော အချက်၆ချက် - Hello Sayarwon
ချောဆီနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်သော အချက်၆ချက်
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 12/06/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ချောဆီဆိုတာ လိင်ဆံဆက်ဆံခြင်းကို သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ချောမွတ်နေအောင် လုပ်ပေးတဲ့ အရာပါ။ အထူးသဖြင့် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် ဖြစ်လာပေမဲ့လည်း မအင်္ဂါ မစိုစွတ်နိုင်တဲ့ မိန်းမတွေအတွက်ပေါ့။ ဒါ့အပြင် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးဆက်တတ်သော ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကွန်ဒုံးသုံးတဲ့အခါမှာလည်း ချောဆီက လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ဆက်ဆံနိုင်စေပြီး ခံစားမှုအပြည့် ရနိုင်အောင် ကူညီပေးမှာပါ။
ချောဆီတွေက ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တာလဲ။
ချောဆီတွေမှာ ဂျယ်ပုံစံနဲ့ အရည်ပုံစံ ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ယင်းချောဆီကို လိင်မဆက်ဆံမီ မိန်းမအင်္ဂါအတွင်းအပြင်နဲ့ လိင်တံတို့ မှာ သုတ်လိမ်းကြပါတယ်။ ပြီးနောက်မှာ အရေပြားက စုပ်ယူသွားပါတယ်။ ရေအခြေခံ၊ အဆီအခြေခံနဲ့ ဆီလီကွန်အခြေခံဆိုပြီး ချောဆီသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ဆီလီကွန်အခြေခံကတော့ အခြေအနေ တော်တော်များများအတွက် အသုံးတည့်ပြီး အဆီအခြေခံကတော့ ကွန်ဒုံးနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
ချောဆီနဲ့ ဆင်တူတဲ့ အခြားအရာတွေကော ရှိသေးလား။
ချောဆီမရှိတဲ့အခါမှာ တချို့လူတွေက အရာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အလှဆီ၊ ကလေးလိမ်းဆီနဲ့ အချို့သဘာဝအဆီ ( အုန်းဆီ၊ သံလွင်ဆီ) တို့က ချောဆီ နဲ့ဆင်တူတဲ့ အဆီတွေပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ချောဆီနေရာမှာ ယင်းအဆီတွေကို အစားထိုးလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ယင်းအဆီတွေက ကွန်ဒုံးတွေကို ပေါက်ပြဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မတင့်တော်တဲ့အဆီတွေ သုံးမယ်ဆိုရင် မွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း လိုအပ်တဲ့ တချို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ ဗီတာမင်အီးနဲ့ ရှားစောင်းလက်ပပ် တို့ကို ကွန်ဒုံးတွေနဲ့ သင့်တော်မယ်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဈေးကွက်မှာ တင်သွင်းနေတဲ့ ချောဆီတွေက စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်သလား။
အများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ ချောဆီတွေမှာ benzocaine ၊ ထုံဆေး၊ capsaicin နဲ့ menthol(ပရုတ်တစ်မျိုး) တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဓါတုဒြပ်ပေါင်းတွေက အသုံးပြုသူကို စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အမွှေးနံ့သာ ထည့်သွင်းထာသော ချောဆီတွေက တုံ့ပြန်မှုပြင်းတဲ့ အရေပြားပိုင်ရှင်တွေမှာ ဆိုရင် ဓာတ်မတည့်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်မှာပါ။ Parabensများ( methyl-, butyl-, ethyl- နဲ့ propyl- parabens များ ) တို့က ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝချောဆီဆိုတော ဈေးကွက်မှာ တင်သွင်းထားတဲ့ ချောဆီတွေမှာ ပါရှိသော ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့လူတွေအတွက် အကြံပြုထားပါတယ်။ ဗီတာမင်အီးနဲ့ ရှားစောင်းလက်ပပ်ပါတဲ့ သဘာဝချောဆီတွေဟာ တာရှည်ခံနိုင်ရည် ရှိကြပါတယ်။ သဘာဝချောဆီအားလုံးထဲမှာတော့ ရှားစောင်းလက်ပပ် ပါတဲ့ ချောဆီဟာ အဆင်ပြေဆုံးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ဓာတ်မတည့်တာတွေ သိပ်မရှိလို့ပါတဲ့။ ဒါ့အပြင် သဘာဝထုတ်ကုန်တွေကို သုံးတော့မယ်ဆိုရင် အသုံးပြုသူဟာ ကွန်ဒုံးနဲ့ အဆင်ပြေလား မပြေဘူးလားဆိုတာ သေချာကြည့်သင့်ပါတယ်။
ချောဆီမှာ ပါတဲ့ သုက်ပိုးသတ်တဲ့ဆေးတွေ ဆိုတာဘာလဲ။
မလိုလားအပ်သော ကိုယ်ဝန်ကို မရနိုင်စေရန် သုက်ပိုးသတ်တဲ့ ဆေးတွေပါတဲ့ ချောဆီတွေဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း သုက်ပိုးသတ်ဆေးမှာ ယားယံနာကျင်ခြင်းနဲ့ မသက်မသာ ဖြစ်စေတဲ့ nonoxynol-9 ဒြပ်ပေါင်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သုက်ပိုးသတ်ဆေးက အရေပြားပေါက်ပြဲရာတွေကို ပိုဆိုးစေတဲ့အတွက် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို များလာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ဒုံးနဲ့ ချောဆီ တွဲသုံးခြင်းက ကိုယ်ဝန်မရစေဖို့နဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။
အရသာသွင်းထားတဲ့ ကွန်ဒုံးတွေလိုပါပဲ အရသာသွင်းထားတဲ့ ချောဆီတွေဟာ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ တစ်မူထူးခြားစေဖို့ အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ တချို့မိန်းမတွေဟာ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံဖို့ကို သူတို့အနံ့တွေနဲ့ ရှက်တာကြောင့် မဆက်ဆံရဲကြပါဘူး။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အရသာသွင်းထားတဲ့ ချောဆီက ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အရသာတွေ မဖြစ်ရအောင် သေချာဂရုစိုက် သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒူးရင်းအရသာမျိုးတွေပေါ့။ ထို့အပြင် ဆီးချိုဖြစ်နေတဲ့ လူတွေလည်း သကြားပါသော ချောဆီတွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
Safety of lubricants for rectal use: Questions & Answers for HIV educators and advocates, International rectal microbicide advocates.,
When Sex Is Painful, The American College of Obstetricians and Gynecologists.,
Accessed on December 25,2016.
Agarwal A, Deepinder F, et al, 2008, Effect of vaginal lubricants on sperm motility and chromatin integrity: a
prospective comparative study, Cleveland Clinic Org, Vol 89, No 2.,
Accessed on December 25, 2016.
Improving Sexual Health: Vaginal Lubricants, Moisturizers, Dilators & Counseling, Health System-University of Michigan,